Maya. 12 Jiilaal 2021 - Abaalmarinta Wararka - Abaalmarinta Abaalmarinta
Bogga ugu weyn Maya. 12 Winter 2021
Tani waa Mary Sharpe sanado ka hor iibsashada maaskaro ee Venedik inta lagu gudajiro xafladda Mardi Gras. Natiijada tamarta guga cusub, waxaan kuu keenaynaa warar badan iyo macluumaad si aan kuugu dhiirrigelino xagga rajada iyo farxadda 2021. Dhammaan jawaab-celinta waxaa lagu soo dhaweynayaa Mary Sharpe: mary@rewardfoundation.org.
Sida Ay Nooga Dhigeen Wax Walba- BBC Dhawaq
Sida Ay Nooga Dhigeen Wax Walba waa taxane aad u fiican oo ku saabsan BBC Dhawaqa wariye Peter Pomerantz. Dhexdeeda ayuu ka baaraandegayaa sida shirkadaha balaayiin-doolar ay shaki ugu abuuraan maskaxda dadweynaha. Tehy waxay tan u sameysaa inay naga joojiso inaan su'aal ka weydiino dhaqankooda iyo saameynta wax soo saarkooda caafimaadkeena.
Sannadkii 1950-kii Tubaakada Weyn ayaa sameysay "buug-yaraha ciyaarta". Tani waxay ahayd xeelado loo adeegsado warbaahinta si ay u dhaliso jahawareer iyo shaki. Saxafiyiinta badanaa waa kuwa liita ama aan sida ugufiican u fahmi karin doodaha cilmiyaysan ee ay u adeegsadaan khubarada warshadaha si ay uga saaraan urta.
Taxanahan ma daboolayo sawir-gacmeedka internetka, in kasta oo aan ognahay xaqiiqda ah in warshadahaas ay adeegsanayaan isla buug-gacmeedka iyo farsamooyinka si ay u dhigaan dadka isticmaala iyo dadweynaha guud ahaan urta ku saabsan waxyeelada porno. Aynu rajeyneyno in Mr. Pomerantz uu kordhiyo himilooyinka warshaddiisa waqtiga soo socda si loogu daro Big Tech, gaar ahaan Big Porn.
Shan luqadood oo jacayl ah - Qalabka Xiriirka
Jacayl? Waa sir.
Laakiin hal dariiqo oo lagu caawin karo in la shaaciyo waa iyada oo la fahmo shan luqadood oo jacayl ah. U adeegso aaladdan xiriir si aad u horumariso noloshaada jacaylka. Suzi Brown, oo ah lataliyaha waxbarashada ee Abaalmarinta Abaalmarinta, ayaa hoosta ku qeexaya sida aan ugu isticmaali karno faa iidadeena.
MindGeek, shirkadda ugu weyn adduunka ee lulataayeyaasha waxaa caqabad ku ah Guddiga Anshaxa ee Baarlamaanka Kanada
MindGeek, oo ah shirkadda waalidka ee shabakadda qaawan ee internetka ee Pornhub, ayaa la kulantay baadhitaan ku saabsan doorka ay ka leedahay fududaynta-iyo ka macaashka-xadgudubka galmada iyo dhiig-miirashada carruurta. Maamulayaasheeda waxaa su'aalo waydiiyey Guddiga Anshaxa ee Golaha Aqlabiyada Baarlamaanka Kanada horraantii Febraayo 2021. Eeg halkan wixii faahfaahin dheeraad ah. Xiriirintan qaybo ka mid ah markhaatifurintooda dhabta ah.
Waxaan aaminsanahay in tani ay tahay markii ugu horreysay ee alaab-qeybiye weyn oo ganacsade ah ay tahay inuu sharraxaad ka bixiyo ficilkiisa xildhibaannada meel fagaare ah.
Yuu Na Dalbaday Dhawaan Inaan Ka Wada Hadalno Afduubka Internetka?
In kasta oo laga yaabo inaanan awoodin inaan wax wada-hadal ah fool-ka-fool ah la yeelano dadweynaha inta lagu jiro xiritaanka, waxaan ku mashquulnay Zoom.
Mary waxay kaqeybqaadatay dood cilmiyeed lala yeeshay Madasha Dhaqanka Cusub Been Abuurka taxane ah. Barnaamijka ayaa loogu yeedhay Sideen uga walaacsanahay inaan ka walwalno galmada? bartamihii Febraayo. Waxaa marti ku ahaa siyaasiga hore Peter Whittle waxaana hada daawaday ku dhawaad ​​10,000 oo daawadayaal ah.
Wadahadalka lala yeesho...Qeybta ilaalinta ee shirkad sharci oo London ah Farrer & Co ayaa ku casuuntay Mary Sharpe inay kaqeyb gasho barnaamijkooda "Wadahadal with." taxane ah oo looga hadlayo filimada qaawan ee internetka iyo dhalinyarada lala socdo lamaanaha Maria Strauss. Aad bay hoos ugu dhacday. Sidaas darteed laba urur oo ilaaliya ayaa nagu casuumay inaan lahadlo xubnahooda sidoo kale.
Dabayaaqadii Janaayo Darryl Mead wuxuu la hadlay Fathers Network Scotland on Dhibaatooyinka Galmada iyo Internetka. Markay tahay 11-ka Maarso saacaddu markay tahay 10.00 subaxnimo ayaa Maryan loo qorsheeyay inay iyaga la hadasho Waqtiga baaritaanka iyo Maskaxda Dhallin-yarada. Eeg Aabbayaashood Shabakad Scotland faahfaahinta fadhiga.
Cilmi-baarisyo muhiim ah
La'aanta xodxodashada xodxodashada ayaa dadka ku kicisay kelidii aan khasab lahayn
Qayb aad u tiro badan oo dadka ka mid ah ayaa si khasab ah kelidii u ah; taas macnaheedu waa, waxay rabaan inay noqdaan xiriir dhow, laakiin waxay la kulmaan dhibaatooyin xagga sidaas ah. Waraaqda hadda jirta waxay isku dayday inay qiimeyso qaar ka mid ah saadaaliyayaasha suurtagalka ah ee ifafaalahaas Si gaar ah, muunad ka mid ah 1228 dumarka iyo ragga ku hadla Giriigga, waxaan ogaanay in kaqeybgalayaashu ay dhibco hoose ka heleen xodxodashada, awood u lahaanshaha garashada calaamadaha xiisaha iyo dadaalka wadajirka, waxay u badan tahay inay noqdaan kuwo aan qasab aheyn oo aan aheyn xiriir dhow, iyo khibrad dheer oo kalinimo ah. Eeg Kalidnimo aan qasab ahayn iyo sababaheeda: Saameynta awoodda shukaansiga, dadaalka wadajirka, xulashada iyo awoodda lagu dareemo calaamadaha xiisaha
Caddaynta Faa'iidooyinka ka yimaada "Dib-u-soo-kabashada" ie ka-joojinta galmada
Tiro sii kordheysa oo shakhsiyaad ah oo adeegsanaya goleyaasha internetka ayaa isku dayaya inay ka fogaadaan filimada qaawan (si isku mid ah loogu yeeray "dib u soo kabasho") sababo la xiriira is-aragtida dhibaatooyinka la xiriira filimada. Daraasaddan tayada leh ee hadda jirta waxay sahamisay waaya-aragnimooyinka foosha-xun ee ka-fogaanshaha xubnaha xubnaha ka ah golaha "dib-u-soo-kabashada". Wadarta joornaalada ka-gaabinta ee 104 ee xubnaha golaha ragga ayaa si nidaamsan loo falanqeeyay iyadoo la adeegsanayo falanqeyn mawduuc ah.
Wadar ahaan afar mawduuc (oo wadar ahaan sagaal hoosaadyo ah) ayaa ka soo baxay xogta: (1) ka fogaanshuhu waa xalka dhibaatooyinka la xiriira filimada, (2) mararka qaarkood ka fogaanshuhu wuxuu u muuqdaa mid aan macquul ahayn, (3) ka fogaansho ayaa lagu gaari karaa kheyraadka saxda ah, iyo (4) ka fogaanshuhu waa abaalmarin haddii lagu adkeysto. Sababaha asaasiga ah ee xubnuhu u bilaabeen "dib-u-dhiska" waxay ku lug leeyihiin rabitaanka in laga adkaado balwadda la dareemayo ee filimada iyo / ama yareeya cawaaqibka xun ee loo aaneynayo isticmaalka filimada, gaar ahaan dhibaatooyinka galmada. Pornography "Rebooting" Khibrad: Falanqeyn tayo leh oo ku saabsan joornaalada Abstinence ee kuyaala Madasha Abstinence ee Pornography Online (2021)
Daraasad ay sameysay dowladda UK oo ku saabsan filimada qaawan iyo dhaqanka galmada ee waxyeelada leh
Arrinta ku saabsan rabshadaha ka dhanka ah haweenka iyo gabdhaha ee bulshada maanta waa mid aad u daran. Jaantusyada ku saabsan rabshadaha guriga, ceejinta galmada ee aan loo dhiman karin iyo kuwa halista ah iyo dhibaateynta guud ee galmada ayaa sii kordheysa heer aad u xun, gaar ahaan xirnaanshaha. Laba dib-u-eegis suugaaneed dhawaan la daabacay oo ku saabsan xiriirka ka dhexeeya isticmaalka filimada iyo dabeecadaha iyo dabeecadaha galmada ee waxyeelada leh markii ugu horreysay waxay raadsadeen aragtida shaqaalaha safka hore ee wax ka qabta kuwa xadgudbay iyo kuwa xadgudbay. Dib u eegisyadani waxay heleen kuwa soo socda: in inta badan shaqaalaha safka hore ee wax ka qabta kuwa xadgudubka loo gaystay ay si iskiis ah u soo xigteen sawir-gacmeedyada oo ah arrin saameyn ku leh dabeecadaha galmada iyo dhaqanka xun ee haweenka iyo gabdhaha. Arag halkan wixii faahfaahin dheeraad ah.
Warbaahinta bulshada iyo diiqadda
Waxaa jiray hadal hayn badan sanadihii la soo dhaafay oo ku saabsanaa in isticmaalka warbaahinta bulshada (SMU) ay ku xiran tahay niyad jab. Daraasaddan cusub ee joornaalka Mareykanka ee Daawada Ka-hortagga ayaa soo jeedineysa inay dhici karto. Waxaan eegeynaa isticmaalka warbaahinta bulshada ee qorshaha casharkeenna bilaashka ah Wasmada, Pornography & Maskaxda Dhalinyarada. Waxaan aad u eegnay niyadjabka Saameynta maskaxda ee Porn. Daraasaddan cusub ayaa lagu eegay 990 Mareykan ah oo ay da'doodu u dhexeyso 18-30 sano jir oo aan ku niyad jabin bilowga daraasadda. Kadib waxay tijaabisay lix bilood kadib. Asalka Isticmaalka Baraha Bulshada: “wuxuu si xoogan oo madaxbanaan ula xiriiray horumarka niyadjabka 6dii bilood ee xigay. Si kastaba ha noqotee, ma jirin wax xiriir ah oo ka dhexeeya jiritaanka niyad-jabka ee aasaasiga iyo kororka SMU 6-da bilood ee soo socda. ”
Eeg halkan wixii faahfaahin dheeraad ah.